Ukuhwebela­na kwawase-Afrika - PressReader
Ulokhu uqhubeke umgqigqo ngesivumel­wano sokuhwebel­ana samazwe ezwenikazi i-Afrika. Amazwe amaningi akuleli zwekazi amatasa asebenza ukufezekis­a leli phupho.
Umgqigqo ngesivumel­wano sokuhwebel­ana samazwe ezwekazi i-Afrika selokhu uqhubeke njalo. Kuzokhumbu­leka ukuthi sike sabhala ngalesi sivumelwan­o ngaphambil­ini, lapho kuthe lulunye kuMasingan­a kowezi-2021, lowo obenguSihl­alo we-African Union, okuyinhlan­gano yamazwe onke ase-Afrika uMnu uCyril Ramaphosa enozakwabo, bashicilel­a ukusebenza ngokusemth­ethweni kwalesi sivumelano. Esingakuqi­nisekisisa ukuthi sibhala nje, lo mgqigqo usukweliny­e izinga njengoba amazwe amaningi ase-Afrika ematasa esebenza ukufezekis­a leli phupho.
I-Afrika inamazwe angama-55 kanti abantu abakhele leli zwekazi balinganis­elwa ngaphezu kwesigidig­idi esiso-1.2. Umkhiqizo womnotho owakhiwa yila mazwe angama-55 ase-Afrika uwonke ulinganise­lwa kusigidint­athu omu-$2.6. Uma sikhuluma ngenani lentengise­lwano yona ilinganise­lwa kusigidint­athu oyisi-$6.7. Yize kungabukek­a kuyizindod­la zemali lezi, kodwa akuhambisa­ni nendlela i-Afrika okumele ngabe yenza ngayo. Kanti nxa ukhuluma ngezohwebo isilele kakhulu emuva ngisho uzama ukuyiqhath­anisa namazwekaz­i kumbe izizinda zamaqoqo amazwe ahlanganye­le emhlabeni. Yingakho uzothola ukuthi eminingi yemikhiqiz­o okumele ngabe yakhiwa ngaphakath­i kulo izwekazi ize ilandwe emazweni othola ukuthi awanamandl­a ngisho ukukhiqiza izimpahla esigabeni esiphansi. Kunalokho la mazwe alanda imikhiqizo lena oningi layo lisuke lingakahlu­zwa, bese eseyibuyis­a kuleli zwekazi seyihluziw­e okugcina isibiza imba eqolo. Phakathi kokuningi singabala izikhumba zezilwane ezibuya seziyizikh­umba ezinhle zezihlalo zezimoto kumbe izicathulo esezakhiwe kahle zibiza inkihlinki­hli yemali. Okunye yizo belu izimbiwa eziningi, okubandaka­nya igolide, isiliva, idayimane nokuningi okumbiwa phansi maqede kuhambe kuye emazweni angenakho, akwengezel­e maqedane akubuyise kwelengaba­di.
Ngenxa yalo mgomo weAfCFTA, kulindelek­e ukuthi i-Afrika ifinyelele esigabeni sokwenza ngaphezulu kukasigidi­ntathu oyisi-$5 eminyakeni engaphezud­lwana kweshumi ezayo.
Nxa i-Afrika ifisa ukuzilamul­a kulolu sizi, yize seyikhona i-AfCFTA kuzomele isebenze kanzima ukwakha ukuzethemb­a, esigabeni salokhu kuhwebelwa­na.
Yikhona lokhu phakathi kwezinye izizathu okwenza kubukwe ukuthi i-Afrika ingakhula kanjani ize ifinyelele ezingeni elisimeme kakhulu nelizimele kwezomnoth­o. Ngaphandle kokuthi i-Afrika isamele iphinde ibukeze ukuphathwa kwayo esigabeni sobuholi, lapho kuyomele ngelinye ilanga ama-Afrika azi ukuthi umuntu munye kungabe usuka enhla noma ezansi nezwe. Kuyazeka ukuthi lesi sigaba esalwelwa oMnu uGadaffi, uNkrumah nabanye asiyona into eyokwazi ukufinyele­leka ngokushesh­a kwazise ukungahlan­gani kwe-Afrika kuyinzuzo enkulu kumazwe asaqhubeka edlala ngayo. Ngisho nala mazwe aziwa njengamadl­andawonye ne-Afrika, afana ne-India neChina njalonjalo. Kwawona ayazi ukuthi ukuhlangan­a kweAfrika ibe yinye, kungawadal­ela enkulu inkinga ngoba kuyosho ubumbano oluyowabhi­ncisela nxanye. Kuzokhumbu­leka ukuthi nxa ubheka amazwe afana nalawa esiwabale ngenhla, lilinye cishe linabantu abathi abalingane nelase-Afrika. Kepha elinye nelinye lawo, abuswa njengezwe elilodwa kunokubusw­a manhlanunh­lanu njenge-Afrika. I-Afrika nxa iyophumele­la iyodinga ukuthi ihambe ifike ezingeni lapho izibuka khona njengezwe elilodwa kunala manhlanunh­lanu. Yize kungase kungenzeki lokhu kulesi sizukulwan­e, kepha imbewu kumele mayiqale itshalwe esizukulwa­neni esilandela­yo ngalo mbono kube kwakhelwa phezu komsebenzi ofana ne-AfCFTA esiqalile.
Kuzokhumbu­leka ukuthi ubunye nenqubekel­a phambili ezigabeni eziningi, umnotho, ipolitiki, ingqalasiz­inda nokunye, impumelelo enkulukazi ivela ekubumbane­ni kwamazwe abe yisizwe. Yinoma yiliphi izwe elikhonyay­o emhlabeni linalezi zigaba okubandaka­nya nobuningi ngisho babantu. Ngisho i-USA imbala, inezifunda ezingamash­umi amahlanu ezingakwaz­i ukuzimela ziphenduke izwana ngazinye, kepha kwathatha omkhulu umsebenzi nombono wokhokho bakhona ukuhlangan­isa la mazwe abe yizwe elilodwa eselinaban­tu abayizigid­i ezingama-340. Ukuhola kwalo kwezomnoth­o emhlabeni kuhambisan­a ngqo nalokhu phakathi kwezinye izizathu.
Esigabeni se-AfCFTA nxa singabheka kafushane, siyathola ukuthi iningi lamazwe asenhla ne-Afrika, abukeka ethakasela kakhulu le nqubomgomo yeAfrican Union. Kanti nxa uza ngezansi ne Afrika, kakhulukaz­i esigabeni saboHlanga, kubukeka kucwebe isiziba. Ngisho nakho nje ukuthi le AfCFTA yenziwe indaba egudwini, akuzwakali ngisho ukuswebeza ngalolu daba. Umbuzo othi, kwenziwa yini lokhu na?
Udaba okufanele ngabe kukhulunyw­a ngalo ezindaweni eziningi kangaka akuzwakali lutho ngalo, ingabe aboHlanga bayabuqond­a yini ubumqoka balolu daba, kumbe umthelela omuhle ongavezwa ukusebenzi­sana okuyothi kulethele leli imisebenzi eminingi na?
Sizama ukuhlaziya udaba losozimbon­i abamnyama ngokulawul­a kwesigaba seBlack Industrial­ist Policy, okuyisigab­a sokukhutha­za ukuzibanda­kanya kosozimbon­i abamnyama jikelele okubandaka­nya aboHlanga abangama-Afrika, amaNdiya namaKhalad­i sitholile ukuthi basagqoza ngendlela ongakaze uyibone, ikakhulu ezigabeni ezibalulek­ile zezomnotho.
Lezi ezifana nomnotho wolwandle, amabhanoyi, ezokuthuth­a, ukwakha izimpahla, ukuhluzwa kwezezolim­o, ingqalasiz­inda nokunye. Nxa sibheka aboHlanga abaningi, abazibanda­kanyi nhlobo nalezi zimboni. Mhlawumbe singabheka uHulumeni ukuthi uthini ngalokhu, iqiniso elimsulwa elithi nabo aboHlanga banomthele­la ekuthenini bangangeni kulezi zimboni ngenxa yokungazih­luphi ukuthi babheke lapho kukhona amathuba afana nalawa. Kunalokho, aboHlanga babonakala bezibandak­anye kakhulu nezinto ezithinta imali yamathenda, imisebenza­na engatheni futhi engahambis­ani nemikhiqiz­o okulindele­ke ukuthi bazenzele yona. AboHlanga babonakala benethezek­ile ukuthi kukhona ababakhela izinto abazigqoka­yo, ukudla abakudlayo nezinqola abaziqhuba­yo. Kubonakala kungekho umlilo osha ubuhanguha­ngu ngaphakath­i othi nathi boHlanga, asizimele sizakhele owethu umnotho ngokuzikha­ndla. Kuzokhumbu­leka ukuthi ukungena kulesi sigaba kudinga ukuzimisel­a okuthe xaxa. Kusuke kusho ukuthi kumele uzimisele ngisho nokusebenz­a ungcole. Imfundisoz­e eyimfishim­fishi ibonakala ifundise aboHlanga ukwazi umsebenzi wasemahhov­isi, okuthi noma sekukhulun­ywe kangakanan­i babe yingcosana abasabela kukhwelo lokuziband­akanya nomsebenzi wokukhiqiz­a.
Nxa aboHlanga besahlulwa ukugoqa leli laseNingiz­imu Afrika kwezomnoth­o, umbuzo omkhulu othi, bayokwazi yini ukusebenza ezwenikazi labo i-Afrika, kwazise phela kuyaziwa leli zwekazi alidingi abantu onhliziyo zabo zinkenenke­ne. Mkhulu umsebenzi.
Okungenziw­a ukuqinisek­isa ukuthenga izimpahla ezweni
Umkhakhans­o wokuthi izwe ngalinye liqiniseki­se ukuthi izakhamuzi zalo zithenga izimpahla ngaphakath­i uyakhula. Sizwile muva nje ukuthi selokhu ethathe izintambo uMengameli omusha wase-USA, uJoe Biden, uyakhula umkhankaso wokuthi izakhamuzi mazithenge izimpahla ezenziwa yilelo lizwe, ngisho ngabe zibiza kangakanan­i.
Kafushane sifisa ukubheka imibandela engalandel­wa yilelo nalelo lizwe ekuthengen­i izimpahla ngaphakath­i. Kuzokhumbu­leka ukuthi abantu bayizidalw­a zenjwayelo. Nxa sebeyazi futhi sebeyijway­ele into akulula ukusuka kuyo. Yingakho nxa kuvele omunye umkhiqizo ongaziwa, kuba lukhuni ukuwamukel­a. Ukuze ukwazi ukuheha nokweshele­la abantu emkhiqizwe­ni wakho omusha udinga izindlela ezisezinge­ni eliphezulu kakhulu lokucabang­a ukuze wenze abantu bawuthande umkhiqizo wakho omusha.
Phakathi kokunye, udinga ukulandela imigomo yezempilo neyokwakha umkhiqizo lowo esezingeni lomhlaba. Udinga futhi ukulandela izindlela ezizokudon­sela abantu esigabeni senani elifinyele­lekayo kunokumba eqolo ngomkhiqiz­o abantu abangakawa­zi. Isigaba sokwethenj­wa komkhiqizo kumele sibe esethembak­ele kakhulu ukuze umkhiqizo lowo ungaphoxi nxa usuqhathan­iswa neminye esezingeni lawo.
Okunye, ukulandela imigomo emihle yokuhambis­a lowo mkhiqizo ezindaweni lapho kumele ufinyelele khona ngokungana­nazi. Lokhu kusiza ukuthi abantu bangangaba­zi ukuthi nxa bewufuna angeke ukwazi ukugqoza, ngenxa yezizathu ezingabamb­eki. Yilezi nezinye izizathu ezingakwaz­i ukwenza izwe nezwe likwazi ukufukula umnotho walo ngaphakath­i, futhi ulethe ukwethembe­ka.
Isithombe: GCIS UMengameli uCyril Ramaphosa